Ukuhlelwa kwe-PCB & Clone - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
I-PCB Clone nokuhlelwa
I-PHILIFAST ineqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe be-PCB kanye neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho okusebenzayo. Ibandakanyeka emikhakheni ehlukahlukene ye-elekthronikhi.
I-PCB clone ukusebenzisa ubuchwepheshe obucwaningayo nobuchwepheshe bokuthuthuka ukuhlaziya kabusha ibhodi lesifunda, nokubuyisa amafayela we-PCB womkhiqizo wokuqala, amafayili wezinto zokwakha (BOM), amafayela wesikimu namanye amafayela wobuchwepheshe, kanye namafayili wokukhiqiza usilika we-PCB, kanye bese uphinde uzisebenzise.
Le mibhalo yezobuchwepheshe nemibhalo yokukhiqiza isetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-PCB, ukuwelda ingxenye, ukuhlolwa kwephenyo ezindizayo, ukulungisa iphutha lebhodi lesifunda, nokukopisha ngokuphelele ithempulethi lebhodi lesifunda yoqobo.
Ngaphezu kokuhlanganiswa kwe-PCB, i-PHILIFAST ibuye inikeze ngezinsizakalo zokwenza izintambo ze-PCB, ukuxhuma izintambo ngokuya ngesikimu samakhasimende nezimfuneko zokuklama. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu iphinde inikeze ukukhiqizwa kohlu lwe-BOM, ukuqaqwa kwe-chip nezinye izinsizakalo. Onjiniyela bethu abakopisha amabhodi kanye ne-PCB design kanye nonjiniyela bokulungisa amaphutha kukuqinisekisa ukuthi Wakhipha ibhodi lesifunda elifanayo ncamashi.